Bubuqqa'uu rifeensa mataa
Bubuqqa'uu rifeensa mataa Featured
Namoonni baay'een guyyaatti wayita rifeensasaanii filataniifi miiccatan yoo xinnaate rifeensi mataasaanii 50 hanga 100fi isaa ol buqqa'a ykn caccaba. Keessumaa rifeensi guyyaa guyyaatti miicamu qajjiisi hanga 250fi isaa ol akka buqqa'u argannoowwan saayinsii garagaraa ni mul'isu.
Bubuqqa'uu rifeensa mataaf akka sababaatti kanneen taa'an keessaa tokko dhibee kaansariidha. Kunis dhibichi hormonota rifeensa mataa dursee waan miidhuuf bubuqqa'uu rifeensichaaf akka sababa ijoo tokkootti fudhatama .
Rakkoon inni biroo wayita dubartiin deessu kan umamudha. Kunis dubartiin tokko wayita ulfaa rifeensi mataashee baay'ee kan itti toluufi bareedu fakkaatee mul'ata. Da'umsaa booda garuu hormoniin istiroojinii wayita hir'atu rifeensishee baay'ee buqqa'uu danda'a. Rakkoon kunis yeroo booda wayita haalli hormonichaa sirratu gara rifeensa duraatti ni deebi'a.
Dabalataanis hormoniin taayirooyid jedhamu qaama namaa keessatti wayita baay'atuufi hir'atu rakkoo kanaaf kan saaxilamu yoo ta'u, qorichiwwan dhibee garagaraaf jedhamanii fudhatamanis haalana rifeensa mataa miidhuu akka danda'an beekameera.
Torban kana/This_Week 12388
Guyyaa mara/All_Days 1821808